Handball – «Mada Jeunes» : mbola mpanjaka ho an’ny sokajy zandriny Ihorombe | NewsMada
Handball – «Mada Jeunes» : mbola mpanjaka ho an’ny sokajy zandriny Ihorombe
Noporofoin’ny ligin’Ihorombe indray fa mbola mpanjaka izy ireo, ho an’ny sokajy zandriny, eo amin’ny taranja handball. Fihaonana, natao teny amin’ny kianja mitafon’Ankorondrano, ny asabotsy 16 avrily lasa teo. Porofon’izany, lasan’izy ireo ny teo amin’ny «cadette» sy ny «junior», vehivavy izay norombahin’ny ASE Ihorombe avokoa. Adin’ny samy Ihorombe ny teo amin’ny «cadette». Tamin’ny isa, 11 no ho 8, ny nandresen’ny tovovavin’ny ASE ny HBCI Ihorombe.
Ho an’ny “junior” indray, lavon’izy ireo, tamin’ny isa 18 no ho 14, ny HCJB Boeny, izay hita fa manana mpilalao tsara, saingy lesoka ny tsy fahampian’ny fihaonana. Ny ASS Toliara kosa ny nahazo izany, ho an’ny sokajy “cadet”, izay nanilika ny ASRB Boeny, tamin’ny isa tery 20 no ho 18. Niady hatramin’ny farany ny fihaonana ary nifanenjehana hatramin’ny farany ny isa teny amin’ny solaitrabe. Baolina very teo amin’ireo fanafihana farany no naharesy an’i Boeny.
Voahosotra ho tompondakan’i Madagasikara ihany koa ny GRP Siteny Toliara, izay anaram-boninahitra voalohany azony. Tamin’ny isa 20 no ho 17 ny nandresen-dry zalahy ny ASS Toliara. Nisongadina ny fahaizan’i Faniry sy i Belanto ary i Romario, ho an’ny GRP. “Azo antoka ny hoavin’ny handball, noho ny fisian’ireto mpilalao niatrika fifaninanam-pirenena ireto. Mahavelombolo ny toe-batana sy ny taona. Ambony koa ny lentan’ny teknika misy eo amin’izy ireo”, hoy Razafintsalama Fidèle, filohan’ny federasiona malagasin’ny handball.
Tompondaka /Sary : Mamiherson